Madaxwayne Xasan Sheikh: "Waa la iga been abuurtay." - Caasimada Online
Home Warar Madaxwayne Xasan Sheikh: “Waa la iga been abuurtay.”
Madaxwayne Xasan Sheikh: “Waa la iga been abuurtay.”
Warsaxafadeed ka soo baxaya xafiska Madaxweynaha Soomaaliya prof Xasan Shiikh Maxamuud ayaa waxaa gaashaanka loogu daruuray amaba waxba kama jiraan lagu tilmaamay war ay qortay wakaalada wararka ee Reuters oo ku aadanaa in Madaxweynaha Soomaaliya uu fasaxay in la dhoofiyo dhuxusha Soomaaliya oo haray cunu qabateyn loo saaray.
Warsxaafadeedka ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Soomaaliya ayaa sidoo kale waxaa lagu tilmaamay in madaxweynaha Soomaaliya uusan iska badalin mowqifkiisii ku aadanaan in gabi ahaanba la joojiyo dhoofinta dhuxusha iyo jarista dhirta isagoo markaasi tixraacaya qaraar ka soo baxay qaramada midowbay oo lagu joojinayo dhoofinta dhuxusha Kismaayo ka socoto.
Dowlada waxa ay wadaa wadadii xal loogu raadin lahaa arinkaan dhoofinta dhuxusha,Madaxweynaha Soomaaliya waxa uu doonayaa in uu xalbuuxa uu gaaro arintaan dhoofinta dhuxusha ee dhawaan cunaqabateynta lagu soo rogay,sidaasi warsaxafadeedka ayaa lagu sheegay.
Prof Xasan Shiiq Maxamuud Madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa shaaca ka qaaday in dowlada wadanka Soomaaliya wali aysan baalmarin go’aankii ka soo baxay Golaha amaanka ee qaramada midowbay islamarkaana go’aankaasi si ay adag ay u ilaalineyso kuna dhaqmeyso,waxa uuna sidoo kale Madaxweynaha Soomaaliya meel cad ka istaagay wararka ay qortay wakaalada wararka ee Reurters ee lagu sheegay in Madaxweynaha Soomaaliya uu ogalaaday in la dhoofiyo dhuxusha Soomaaliya.
Ugu danbeyntii warsaxaafadeedka ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Soomaaliya ayaa imaanaya,iyadoo shirjiraa’id uu qabtay madaxweynaha Soomaaliya uu ku sheegay in si ka badalan sidii uu sheegay u dhigtay Reuters taasina uu ku tilmaamay in tahay mid ka hor imaaneysa sharciga saxaafada iyo mas’uuliyad daro oo ay dusha saarteen dadka warkaasi qoray.